Selections from Colourful Burma by Khin Myo Chit . ရောင်စုံလှစွာ ပြည်မြန်မာ – ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
Selections from Colourful Burma by Khin Myo Chit . ရောင်စုံလှစွာ ပြည်မြန်မာ – ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း
Selections from Colourful Burma by Khin Myo Chit
ရောင်စုံလှစွာ ပြည်မြန်မာ – ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း
(မိုးမခစာအုပ်စင်) နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၄
စာအုပ်အမည် – ရောင်စုံလှစွာ ပြည်မြန်မာ
ဘာသာပြန်သူ – ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း
မူရင်း – Selections from Colourful Burma by Khin Myo Chit
၂၀၀၇ အောက်တုိုဘာ၊ အုပ်ရေ ၁၀၀၀၊ တန်ဖိုး ၃၀၀၀ ကျပ်၊
ပါရမီစာပေ၊ ၂၃၀၊ ၂၉ လမ်း ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။ ရန်ကုန်။ ဖုန်း ၂၅၃၂၄၆
၂၊ ၄ ကမာ္ဘေအးစေတီတော်မုခ်ဦးစောင်းတန်း။ ရန်ကုန်။
၂၉ ၅၊ ဈေးအရှေ့လမ်း၊ ထားဝယ်။
အီးမေး paramibk@myanmar.com.mm, www.myanmarbookshop.com
စာမျက်နှာ ၂၀၈၊ အခန်း – ၅ခန်း၊ မျက်နှာဖုံး ပန်းချီ – သန်းမြင့်အောင် 2007
Pagodas and What They Mean to Buddhists, A Buddhist Childhood, Shinpyu, Women in Buddhism, Blessed is the Blameless Life စသော ဆောင်းပါးများကုို “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အပေါ် စေတီပုထုိုးများ၏ အရေးပါမူ“၊ “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး၏ ကလေးဘ၀“၊ “ရှင်ပြု“၊ “ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အမျိူးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍ”၊ “အပြစ်ကင်းစင်သော ဘ၀သည် ကောင်းလေစွ” များအဖြစ် မြန်မာပြန်ဆုိုထားသော ဆောင်းပါးများကုို နှစ်ဘာသာ တွဲလျက် တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် စကားလုံးများ၏ အဓိပ္ပာယ် များကုို ပေးထားသဖြင့် စာဖတ်သူသည် ဖတ်ရင်းနှင့်ပင် အင်္ဂလိပ်စာလည်းတုိုးကာ မြန်မာပြန်ကုို ဖတ်ပြီးခံစားရပေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ခင်မျိူးချစ်၏ အမှာစာ ကိုလည်း အင်္ဂလိပ်မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ရေးသား တင်ပြထားသောကြောင့် မြန်မာလူမျိူးများ၏ ဓလေ့စရုိုက် အကျင့်များ၊ ယဉ်ကျေးမူ ဓလေ့ထုံးစံများ အတွေးအခေါ် အယူအဆများ ကုို ဆရာမကြီး၏ သဘောထားအမြင်များဖြင့် ယှဉ်တွဲဖတ်ရူရပေလိမ့်မည်။